Uyenza njani iTrailer yeVidiyo yakho
Iitreyila zeefilimu ziyilelwe ukubonisa abaphulaphuli ukuba ithini malunga nefilimu nokubakhuthaza ukuba bafune ukuyibona xa ikhutshwa. Kubalulekile ukuba ungabonisi kakhulu umgca webali; Ngaphandle koko abantu abayi kufuna ukubona ifilimu egqityiweyo - baya kuba sele beyazi ukuba kwenzekani kwi-trailer! Olu luhlu lulandelayo luchaza izinto ezimbalwa onokunqwenela ukuzibandakanya kwinqwelwana yakho.
UFentanyl ukubulala njani
Uhlobo lwefilimu: Xa abaphulaphuli bebukele i-trailer yetreyini, bafuna ukwazi uhlobo olo. Ngokubandakanya ukukhwela kweendawo kunye namaxesha aphambili kwibali lakho, abaphulaphuli bakho banokulwenza uhlobo lwefilimu yakho. Ukuba wenza i-trailer yefilimu yesenzo, unokufuna ukubandakanya amandla aphezulu kunye nesenzo sokudubula kwifilimu yakho.
Abasebenzi bakhethe uhlobo olonwabisayo lwefilimu ukuze babandakanye iifoto zokujongeka belahlekile kwaye babaleke, ukudubula kwabantwana beva ingxolo, kunye nemipu yomlinganiswa abadibana naye.
Intshayelelo: Iitreyila ezininzi zibandakanya intshayelelo yebali okanye yomlinganiswa ochaza imvelaphi okanye imbali. Iitreyila zeefilimu ezibalaseleyo zihlala zibonisa iziqeshana ezichaza ukuba bawafumene njani amandla abo amakhulu. Ukuba wenza i-trailer yefilimu yamanga yesayensi, unokufuna ukubonisa iziqwengana zobomi bomlinganiswa wakho ngaphambi kokuba abaphambukeli bahlasele. Oku kunokwenziwa luthotho lweefoto ezakha ezona ziganeko ziphambili kwibali lakho.
Kwikharavani enye yeqela labadlali baye baquka indawo yokuqala ngaphambi kokuba abalinganiswa bangene ehlathini emva koko badubule ezimbalwa ehlathini. Oku kunceda ukwazisa abalinganiswa kwaye kunike imvelaphi yebali.
Abalinganiswa: Itreyila lithuba elihle lokwazisa abaphulaphuli bakho kubalinganiswa kwifilimu yakho. Ngokubandakanya amaxesha abalulekileyo kwibali lakho kunye namaxesha aphambili kubadlali bakho, abaphulaphuli bakho banokubazi abalinganiswa bakho kwaye benze indima yabo kwifilimu yakho. Ukuba wenza i-trailer yomdlalo wolwaphulo-mthetho, unganqwenela ukubandakanya amaxesha avela kubalinganiswa bomcuphi kunye nawo nawaphi na amaxesha avela kwizikhohlakali zakho.
Faka imigca emifutshane yencoko ukunceda ukubalisa ibali nokwazisa abalinganiswa. Okanye, ungabandakanya iziqeshana zomlinganiswa ngamnye ebalini kwaye umlinganiswa ngamnye abonakalise incinci yebali ngento nganye ayithethayo.
Iimvakalelo: Abaphulaphuli bathanda ukubona iimvakalelo kunye neentetho ezirhuqwayo njengoko oku kubanceda ukuba baqonde iimvakalelo abaza kuziva xa bebukele ifilimu. Ukuba wenza i-trailer yefilimu eyoyikisayo, unokufuna ukubandakanya iziqeshana zabalinganiswa bakho abakhangeleka boyike.
Kwikharavani enye yeqela labadlali, abenzi beemovie baquka iziqwengana zabantwana abasehlathini abakhangeleka belahlekile emva koko boyike ngakumbi. Babandakanya iiklip zelizwi ezivela kubalinganiswa, bethetha izinto ezinje ngokuba asizukuyenza! Ukudubula okungakumbi kubonisa iimvakalelo kunye neenkcazo ezivela kubalinganiswa bakho ozibandakanya kwikhovila yakho, kokukhona kunokwenzeka ukuba ubandakanye abaphulaphuli bakho.
Isiphelo: Le yinxalenye ebalulekileyo yetreyila yakho yefilimu kuba kulapho ushiya khona abaphulaphuli bakho. Ekupheleni kwetreyila, abaphulaphuli bakho baya kwenza iingqondo zabo malunga nefilimu yakho nokuba bafuna ukubona ingxelo epheleleyo okanye hayi.
Ufuna abaphulaphuli bakho baphethukele emntwini osecaleni kwabo kwaye bathi ndifuna ngokwenene ukuyibona loo nto. Ukwenza oku, kuya kufuneka ugqibe erhuqwayo lwakho nefuthe. Unokwenza, umzekelo, ujonge ukushiya abaphulaphuli bakho benombuzo engqondweni, uzibuza ukuba kwenzeka ntoni emva koko.
Jonga ezinye iitreyila ezikwi-Intanethi ukubona ukuba zenziwa njani abanye abalawuli. Ngumbono olungileyo ukubukela inqwelwana evela kwifilimu osele uyijongile ukubona indlela itreyila yayo elichaza ngayo ibali ngaphandle kokunika kude kakhulu.
Nali iphepha lolwakhiwo elenzelwe iqela labadlali befilimu ebonisa ezinye zexesha eliphambili abafuna ukuzibandakanya kwinqwelwana yabo.
Iphepha lesakhiwo linokukunceda ucwangcise i-trailer yakho.
yeyiphi ipilisi ene 230 kuyo
skelaxin 800 mg yexabiso lesitalato
Yintoni ihydroxyzine hydrochloride
I-poly vi sol idosi
Uhlala ixesha elingakanani
ungathatha ibuprofen nge-prednisone